အလိုက်အထိုက် ချက်ကြည့်လိုက် | Food Magazine Myanmar
ဇူလိုင်လမှာတော့ ဆရာမနန်းစန်းစန်းအေးက “ငါးခူမဆလာချက်” အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇) မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ် များကတော့ –
၁။ ငါးခူမဆလာချက်၊ ကြက်ဥဆွန်ထန်ဟင်းရည်၊ ပန်းပွင့်စိမ်းကြော်၊ ငါးပိကင်သုပ်။
၂။ ဆိတ်ရိုးပဲဟင်း၊ ငါးမြွေထိုးအစပ်ကြော်၊ မန်ကျည်းရွက်အစိမ်းသုပ်၊ မန်ကျည်းသီး ကြက်သနီးထောင်း။
၃။ ဝက်အချင်းတိုင်ချက်၊ ကန်စွန်းချဉ်ပေါင်အချဉ်ဟင်းရည်၊ ကြက်ဥချပ်ကြော်၊ ပူဒီနာ ငါးပိထောင်း အတို့စုံ။
၄။ ဘဲသားမှိုပေါင်း၊ ငှက်ပျောဖူးဟင်း၊ မုန်လာဖူးကြော်၊ ပဲပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း။
၅။ ကြက်သားပိန္နဲသီးဗမာချက်၊ ပဲပင်ပေါက် ပဲပြားကြော်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းငါးပိရည်၊ အတို့စုံ၊ မုန်ညင်းဖြူ ကြက်ဥ ချဉ်စပ်ဟင်းရည်။
၆။ ငါးပြေမခြောက်ခရမ်းချဉ်သီးချက်၊ ဘူးညွှန့်ဟင်းရည်၊ မုန်လာဥနီသုပ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းကင်သုပ်။
၇။ ဝက်နံရိုးကြွပ်ကြော်၊ ခရမ်းသီးနှပ်၊ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းချို၊ သရက်သီးအစပ်ကြော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးထဲမှ ငါးခူ မဆလာချက်၊ ကြက်ဥဆွန်ထန်ဟင်းရည်၊ ပန်းပွင့်စိမ်းကြော်နဲ့ ငါးပိကင်သုပ်တို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“သမီးရဲ့အသက် လာမယ့်ရှစ်လပိုင်းဆို ၂၆ နှစ် ပြည့်ပြီ”
“အေ . . . အစိတ်ကျော်ရင် အပျိုကြီးဖြစ်ပြီပဲ။ ဘယ်လိုလဲ၊ လက်ထပ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလား”
“တစ်ယောက်တည်းတောင် ကိုယ့်အတွက် အချိန်မလောက်ဖူးဖြစ်နေတယ်။ ပြီး အခုခေတ်ယောကျာ်းလေးတွေက ဆရာကံချွန်ပြောသလို မေ့ထက်အဆင့်အတန်း မနိမ့်အောင်ထားဖို့ မေတို့အိမ်မှာ မောင်လိုက်နေမယ်ဆိုတာက ခပ်များများရယ်”
“ခေါ်ခဲ့စမ်းပါ။ အိမ်မှာလိုက်နေချင်လို့ကတော့ အလုပ်အကိုင်တွေ အမေဖန်တီးပေးမှာပေါ့”
“တို့အမေကတော့ သမီးဈေးကျအောင် လုပ်နေပြန်ပါပြီ။ အနားမှာ လူပိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ မနေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့အတွက်မှ ထပ်ပြီး မစဉ်းစားချင်ဘူး”
“အရှည်ကြီးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ မေမေရာ။ ကလေးလိုချင်ရင် မွေးစားပါလား။ အမေပဲ ခဏခဏပြောတဲ့ မေတ္တာပေးရင် မေတ္တာရမယ်ဆို”
“အေဟေ့ . . . မွေးစားလိုက်မယ် ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်”
“ဖြစ်ရပြန်ပါပြီ။ သမီးရဲ့ ညီမလေး၊ မောင်လေးတွေလို သဘောထားမှရမှာပေါ့”
“ချစ်တာကတော့ ချစ်မှာပါ။ မဟုတ်တာလုပ်လို့ကတော့ သမီးက ရိုက်ပြီးသားပဲ”
“ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိတဲ့ မောင်လေး၊ ညီမလေးတွေကို ဆုံးမမယ့် အစ်မကြီးပေါ့”
“သမီးက ကလေးတွေ၊ ခွေးတွေကိုတော့ ချစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစားကောင်းကောင်းတွေစားပြီး အမေ့အနားမှာပဲ နေချင်တယ်”
“ဒါဆို သဘောပေါက်ပြီ။ ထမင်းစားကြစို့”
ဒီနေ့အတွက် ငါးခူမဆလာချက်၊ ပန်းပွင့်အစိမ်းကြော်၊ ကြက်ဥဆွန်ထန်ဟင်းရည်နဲ့ ငါးပိကင်သုပ်ထား တယ်။
ငါးခူ ၃၀ သား သုံးကောင်၊ အရိအရွဲတွေ ပြောင်အောင်ပွတ်ဆေးပြီး အနေတော်တုံးမယ်။ ဆား၊ ငံပြာ ရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစီ၊ အရသာမှုန့်ဇွန်းတစ် ဝက်၊ နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်နဲ့ ရောနယ်ထားမယ်။
ချက်မယ့်အိုးထဲ ဆီ ၁၀ သားထည့်မယ်။ ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်နီနှစ်ဥ၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှစ်ဥ၊ ငရုတ်ပွ ၅ တောင့်ကို အစေ့ထုတ်ပြီးရေစိမ်၊ ရောထောင်းထားတဲ့ အဆာထည့်ကြော်မယ်။ အဆာဖတ်တွေ အနံ့မွှေးပြီး ရွှေဝါရောင်တောက်လာရင် ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံးကို အနှစ် တိုက်ထားတာထည့်မယ်။ ဆီပြန်လာရင် ငါးတုံးတွေ ထည့်မယ်။ ငါးထဲပါတဲ့ အရည်ခန်းရင် ရေ ၅ ကျပ်သား တစ်ခွက်ထည့်၊ အဖုံးအုပ်၊ မီးအရှိန်လျှော့ပြီး ငါးကျက်အောင်တည်မယ်။ ငါးကျက်ရင် မဆလာတစ်ဇွန်းနဲ့ ရှမ်းနံနံတစ်စည်း ခပ်ပါးပါးလှီးထားတာကို အုပ်လိုက်ရင် ငါးခူမဆလာဟင်းကျက်ပါပြီ။
ပန်းပွင့်စိမ်းကြော်ကတော့ ပန်းပွင့်တွေကို အနေတော်လှီးဖြတ်ပြီး ဆီစတီးဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာနဲ့အတူ ကြက်သွန်ဖြူငါးတက် ဓားပြားရိုက်၊ အနံ့မွှေးအောင်ကြော် ဝက်သားပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြက်သားအသားဖြစ်ဖြစ် ထည့်ကြော်ပြီး ပန်းပွင့်ထည့်၊ ဆားအရသာ အနေတော်ဖြစ်အောင်မြည်းပြီး ကျက်ရင် ပန်းပွင့်အစိမ်းကြော်ဖြစ်ပါပြီ။ ခရုဆီ၊ ကော်ရည်ကြိုက်တတ်ရင် ထပ်ဖြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
ကြက်ဥဆွန်ထန်ဟင်းရည်အတွက် အရိုးပြုတ် ရည်ထဲကို ဆွန်ထန်ခွေရဲ့တစ်ဝက် (သို့) ကိုယ့်အကြိုက် လက်တစ်ဆုပ်၊ နှစ်ဆုပ်စာလောက်ထည့်၊ ပွက်ပွက်ဆူလာရင် ချင်းနှစ်ပြား၊ သုံးပြား ဓားပြားရိုက်ထည့်၊ ဆား အရသာအနေတော်ဖြစ်အောင်မြည်း၊ ကြက်ဥတစ်လုံး ကြေအောင်ခေါက်ပြီး ဟင်းရည်ထဲလောင်းရင်း မွှေရင်း ထည့်။ ဒါဆို အရသာခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆွန်ထန်ဟင်းရည်ရပါပြီ။ အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်းသုံး၊ လေးတောင့်ကို ဓားပြားရိုက် ဖြည့်လိုက်ပါ။
ငါးပိကင်သုပ်ကတော့ စိမ်းစားငါးပိအကောင်းစား တစ်ဇွန်းစာ မီးကင်၊ အနံ့မွှေးလာရင် ကြက်သွန်နီတစ်ဥ ပါးပါးလှီး၊ ငရုတ်သီးငါးတောင့် ညက်အောင်ထောင်း၊ ဆီ၊ ဆား၊ အချဉ်ရည် အနေတော်ထည့်ပြီး နယ်ဖို့ပါ။ ပုစွန်ခြောက်အမှုန့်၊ အကောင်ပါရောနယ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါမယ်။
အသီးအရွက်တွေမပါရင် ထမင်းမစားတတ်တဲ့ သမီးအတွက် သခွားသီး၊ သရက်သီးစိတ်၊ ဆလတ်တွန့်၊ နံနံပင်၊ မြင်းခွာရွက်၊ ကဆော့သီး၊ စားလို့ရတဲ့ အသီးအရွက်ပေါင်းစုံ ရံပေးထားပါဦးမယ်။
အရင့်အရင် အချိန်တွေတုန်းကလို အမေ၊ အဖေကပြောရင် နားထောင်ပြီး လိုက်နာမယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်တွေ ကုန်နေပြီဖြစ်လို့ သားသမီးအကြိုက် အလိုက်သတိနေဖို့ရာ မိဘတွေရဲ့ ဝတ္တရားတွေထဲ ထည့်ပေါင်းပြီး အေးရာအေးကြောင်းနေရမယ့် အခုခေတ်မိဘများရဲ့ဘဝပါပဲ။
♦ ပန်းပွင့်စိမ်း – ၁ ထုပ် (အနေတော်လှီးဖြတ်ထားပါ)
♦ ဆီ – ၁၀ ကျပ်သား
♦ ဝက်သားပြုတ် (သို့) ကြက်သားပြုတ် – အနည်းငယ်
♦ စိမ်းစားငါးပိ – ၁ ဇွန်း
♦ ဆွန်ထန် – တစ်ဝက်
♦ အရိုးပြုတ်ရည် – စိတ်ကြိုက်
♦ ငါးခူ – ၃၀ သား
♦ အရသာမှုန့် – ဇွန်းတစ်ဝက်
♦ နနွင်းမှုန့် – အနည်းငယ်
♦ ဆီ – ၁၀ သား
♦ ငရုတ်ပွ – ၅ တောင့်
♦ ရေ – ၅ ကျပ်သား
♦ မဆလာ – ၁ ဇွန်း
♦ ရှမ်းနံနံ – ၁ စည်း